Rob Zombie mizara ny sarin'ny 'The Munsters' Cast - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Rob Zombie mizara ny sarin'ny 'The Munsters' Cast
Rob Zombie mizara ny sarin'ny 'The Munsters' Cast
by Trey Hilburn III Oktobra 18, 2021 17,966 hevitra
Rob Zombie dia nizara betsaka ny sary famokarana Ny Munsters ao amin'ny Instagram. Sarin'ny trano ao amin'ny 1313 Mockingbird Lane, sarin'ireo mpivaro-tena amin'ny make-up, sy maro hafa. Androany dia nizara ny sarin'ireo mpilalao sarimihetsika ho an'ny sarimihetsika ihany i Zombie nony farany ary saika izany no hitantsika hoe ho marina.
Ny mpilalao dia niaraka tamin'i Jeff Daniel Phillips ho Herman, Sheri Moon Zombie tahaka an'i Lily Munster ary Daniel Roebuck ho Dadabe. Ny sary dia mampiseho ireo telo nipetraka teo alohan'ny trano tamin'ny 1313 Mockingbird Lane.
Tena ho sarimihetsika Rob Zombie io. Ireo dia mpilalao mpikambana izay niara-niasa tamin'i Zombie tamin'ny horonantsariny teo aloha, ka fantatrao fa ho avy miaraka amina vazivazy mitovy io. Mazava ho azy, io no tetibola lehibe indrindra an'ny Zombie. Noho izany, hahaliana ny mahita hoe naoty inona no miaraka aminy.
“Satria efa manakaiky haingana ny Halloween, dia noheveriko fa izao no fotoana tsara indrindra hihaonan'ireo MUNSTERS! ???? Direct avy amin'ny set any Hongria taloha ???????? Manolotra an'i Herman, Lily ary The Count aho mipetraka eo anoloan'ny 1313 Mockingbird Lane. Nanoratra tao amin'ny Instagram-ny i Zombie.
Will, Zombie hanao an'ity traikefa mahitsy PG ity ve sa hanamboatra kinova R naoty mafy loha Ny Munsters? Izay rehetra mbola ho hita. Saingy misy zavatra milaza amiko fa ny olon-kafa dia manantena hanana feo maivana kokoa amin'ny klasika Munsters mahatsiaro.
Ahoana ny hevitrao momba ny mpilalao Rob Zombie Ny Munsters? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra ao amin'ny anay Facebook ary Twitter pejy.